China Sectional Belt Vulcanizing Press ZLJ Series Heavy-duty Type ifektri abakhiqizi | U-Antai
Ukusetshenziswa Indwangu yebhande I-100 psi (7 kg / cm sq.)
Intambo yensimbi yensimbi 200 psi (14 kg / cm sq.)
Ubukhulu. Ububanzi beBelt Kusuka ku-650mm kuye ku-3000mm
Ingcindezi System Isikhwama sokucindezela amanzi (futhi siyakwazi ukusebenzisa umfutho womoya.). Cindezela nge-100 PSI, 200 PSI njll., Ingcindezi engaphezulu yamabhande endwangu nensimbi, kuze kufike ku-1.8Mpa.
Ukushisa kwe-Vulcanizing Ukushisa kwe-Vulcanizing: 145 ℃ (okuguquguqukayo okungu-0 ~ 200 ℃)
Uhlelo Lokupholisa Ingcindezi yokupholisa ukupholisa, isikhathi sokupholisa ama-5mins kuphela (ukupholisa kusuka ku-145 ℃ kuye ku-75 ℃).
Izinga lokushisa iPlaten I-Bias angle 22 ℃ noma 17 ℃, 20 ℃, unxande namanye amadigri wezinketho.
Amandla 220V, 380V, 400V, 415V, 440V, 480V, 660V, noma njengokucela kwekhasimende.
1. Amayunithi angama-200 e-psi (14 kg / cm sq.) Alungele ukusika ibhande lensimbi elihambayo.
2. Yamukela imihlangano yensimbi eqine nensimbi ephezulu.
Uhlelo lokuvimbela oluthuthukisiwe lulula futhi lusebenziseka kalula, ukuvikela ezingozini ezingaholela ekwehlulekeni kwe-bolt.
I-3.Lightweight aluminium platens isebenzisa uhlelo olusha lokupholisa ngokushesha ngaphakathi kwamapuleti.
4. Ukwenza ngokwezifiso: Ukushintshwa kwe-angle platen angle kanye namalungiselelo amaningi we-platen ayatholakala ngokwesicelo sekhasimende ngalinye.
Uhlelo olusha lokuxhuma ngogesi olusha: Imfashini yakudala yesimanje nepokhethi isepulaki eliyisicaba, izikhonkwane ze-plug zilula ukuphulwa. Umklamo wethu omusha wepulaki ungokwesayensi futhi unengqondo ngokwengeziwe. Isebenza lula kakhulu, iphephile futhi inokwethenjelwa.
6.Pressure isikhwama uhlelo:
Iyakwazi ukuqhubeka ngamanzi nangomoya, ukubumba ngasikhathi sinye, ngaphandle kohlaka lwensimbi, isisindo esincane kanye nengcindezi yokuhlola ephuma efekthri ifinyelela ku-2.5MPa (isikhwama sokucindezela sakudala esakhiwe ngohlaka lwensimbi namabhawodi, isisindo esisindayo.)
Impompo yengcindezi ezenzakalelayo ene-gauge yengcindezi, ivumela ukusetshenziswa okulula kwengcindezi kuze kufike ku-200PSI yensimbi yentambo. Yonke inqubo izoba yimodi egcwele-auto. Ngemuva kokusebenzisa isistimu entsha yokupholisa ekushiseni iplaten, ingaphola kusuka ku-145 ℃ kuye ku-75 ℃ kungakapheli imizuzu emihlanu.
Iphampu yokupholisa, lapho isebenza nge-air compressor, ingcindezi yomoya, ipompo lokupholisa elinjalo lingasetshenziselwa ukupholisa. (Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi, uma unezidingo ezikhethekile zamandla ompompi wokupholisa, sicela usazise ngaphambi koku-oda, i-voltage ejwayelekile ingu-220V isigaba esisodwa)
Sectional Vulcanizing Press ZLJ Series yilezi siyasebenziseka ekuhlanganeni kule mikhakha: insimbi, imboni yamakhemikhali, ukumbiwa kwensimbi, isitshalo samandla, amachweba, amachweba. Ubuso bokubumbana bushelelezi, futhi bunganciphisa ulaka futhi kwenze ibhande lokuhambisa lisebenze isikhathi eside.
Kunconywe Ukusebenza Amapharamitha:
Ukuphulukisa ingcindezi: 1.0-2.0 mpa;
Ukuphulukisa izinga lokushisa: 145 ° C;
Ukungafani kokushisa kwepuleti le-Vulcanization: +/- 2 ° C;
Isikhathi sokushisa (kusuka ekamelweni lokushisa kuya ku-145 ° C) akuyona imizuzu engaphezulu kwe-30;
I-Voltage ehlobene: 380V, 50 Hz, AC, noma njengokucela kwekhasimende;
Amandla wokukhipha: 36 KW;
Ibanga Lokulungiswa Kwethempelesha: 0 ~ 200 ° C;
Ibanga Lokulungisa Isikhathi: 0 ~ 99 amaminithi
Langaphambilini Umshini we-DB-G wensimbi ye-Cord Conveyor Belt Peeling ye-Splicing
IBelt Vulcanzing Cindezela
I-Conveyor Belt Vulcanzing Press